Ny mitolona amin'ny fanoherana ny virtoaly Coronary dia mitohy tsy misy fahatapahana haingana any Ankara | RayHaber | raillynews
HomeTORKIACentral AnatoliaAnkara 06Mitohy any Ankara ny ady amin'ny fanoherana ny aretin-kozatra
Mitohy any Ankara ny ady amin'ny fanoherana ny aretin-kozatra
24 / 03 / 2020 Ankara 06, Central Anatolia, Railway, PHOTOS, ANKAPOBENY, Highway, KENTİÇİ Rail Systems, Tire Wheel Systems, Headline, Metro, TORKIA
Mitohy hatrany ny ady amin'ny valan'aretina coronavirus ao Ankara nefa tsy miadana
Ny kaominina ao Ankara Metropolitan dia nanohy ny tolona nataony tamin'ilay valan'aretina coronavirus. Ny ben'ny tanàna Metropolitan Mansur Yavaş dia nilaza fa hanohana ny olom-pirenena olom-pirenena 65 taona mahery izy ireo, izay niantso ny "HomeKal", taorian'ny ora kodiarany.
Niresaka tamin'ny olom-pirenena 65 taona mahery ary tamin'ny alàlan'ny kaontiny media sosialy, nanambara ny Ben'ny tanàna Yavaş fa nanofa tranom-bidy môtô izy ireo mba hiasa ao amin'ny tsena sy sampana 17, ary ho azo tanterahina ny zavatra rehetra ilain'ny olom-pirenena tafiditra amin'izany sehatra izany. ASKİ dia hanatanteraka ny fampidinana rano amin'ny famandrihana rano ho an'ireo mpampiasa ny taona 65 mianaka, izay manana metatra misy rano karatra, hatramin'ny talata 24 martsa. Ny ekipan'ny Kaotikan'ny Metropolitan miasa amin'ny sahan'ny 7/24 ho an'ny fahasalamam-bahoaka, manala otrikaretina isan-andro any amin'ny faritra sy toeram-panjakana ary fikambanana, indrindra ny fiara fitateram-bahoaka.
Ny monisipaly Ankara Metropolitan dia mitohy ny tolona miady amin'ny valanaretina coronavirus nefa tsy mihemotra.
Manampy ny fitomboan'ny fihanaky ny otrikaretina ho an'ny fahasalaman'ny besinimaro dia mametraka fepetra vaovao ihany koa ny kaominina Metropolitan. Ny ben'ny tanànan'i Ankara Metropolitan Mansur Yavaş dia nanambara tao amin'ny kaontiny media sosialy fa ny filan'ny tsena isan'andro dia an'ny olom-pirenena efa ho 65 taona no ho miakatra, izay no nampiharina tamin'ny famatsian-dàlana sy niantsoana ny "HomeKal", amin'ny alàlan'ny mpiambina môtô nofaina ny Kaomina Metropolitan.
Ny ben'ny tanàna Yavaş, izay nizara ny lisitry ny tsena sy sampana 17 tany Ankara, voalohany, ao amin'ny kaonty media sosialy sy ao amin'ny tranokalan'ny Metropolitan, dia niresaka tamin'ny olom-pirenena olom-pirenena 65 taona ary mihoatra ireto teny ireto:
“Ry olom-pirenena malalako, voalohany indrindra, tongava at all aminareo rehetra. Manantena aho fa hiara-hiasa amin'ireo andro ratsy ireo isika. Raha ny fantatra dia nampidirina taminny taona 65 taona no ho miakatra ny curfew. Mitohy hatrany ny fifampiraharahantsika eo amin'ireo tsena amin'ny tsena. Tsy ho ela dia hamoaka azy rehetra amin'ny toerana misy azy isika, fampahalalana momba ny adiresy, sampana ary fampahalalana momba ny fifandraisana. Ho afaka hahazo mora foana izay tianao ianao. Manana fifampiraharahana amin'ny orinasa courier koa izahay. Amin'ny maha-tanàna anay, dia hiezaka hanampy anao amin'ny filanao izahay. Ny fanazaran-kevitry ny kaompanianay momba ny serivisy an-trano dia mitohy. Ankoatr'izay, ny serivisy fihinanana sakafo mafana dia mitohy ho an'ny fianakaviana 20 izay mipetraka ao ambanin'ny tokon-kelin'ny hanoanana. Manantena aho fa ho tafavoaka velona amin'ireo andro ratsy ireo ianao raha tsy manimba. Miaraka isika handeha hifampitantana. Manaja anareo rehetra aho. ”
Ny sampan-draharaha misahana ny asa sosialy ao Metropolitan no mandoa ny saram-pitaterana mifandray amin'ny Federasiona an'ny moto rehetra miaraka amin'ny môtô. Manatanteraka fomba fiasa monisipaly amin'ny asa soa ara-tsosialy, ny Kaomina Metropolitan dia hanome io serivisy io maimaim-poana ho an'ny olom-pirenena olom-pirenena 65 taona no ho miakatra, ary koa manakana ireo mpiasan'ny tsy miasa izay mitondra karama isan'andro.
Çağdaş Yavuz, Filohan'ny Federasiona ho an'ny mpampita fiadiana môtô ao Anatolian, izay nivory teo anoloan'ny Kaominina Metropolitan ary nilaza fa vonona hiasa izy ireo:
“Amin'ny voalohany, hiasa miaraka amin'ny 100 mahery izahay. Hanohy hiara-miasa bebe kokoa isika arakaraka ny fitomboan'ny tinady. Manana adidy amin'ny maha federasiona azy isika. Mandra-pahatongan'ny fipetraky ny olom-pirenena olom-pirenena 65 taona mahery ary manana aretina mitaiza, dia handray ny sakafony sy ny filàna fototra ivoahan'ny tsena isika, eo anelanelan'ny 12.00-17.00. Amin'izao fotoana izao, mihidy ny trano fisakafoanana sy ny tranokala rehetra, ary tsy an'asa koa ny mpiantsena môtô. Ny ben'ny tanànanay Metropolitan no nandray an'ity toe-javatra ity ary farafaharatsiny mba nanana vola isan'andro isan'andro tany an-tranony ny mpandray anay. Manolotra ny fankasitrahantsika sy ny fisaoran'ny filohanay izahay. ”
Ny filankevitra an-tanànan'i Ankara dia nanintona ihany koa ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-miasa eo amin'ny Federasiona Iraisam-pirenena Miara-mitarika motera-moto, ny Fikambanan-jotra eto an-toerana ary ny fivarotam-pivarotana, noho ny fanohanan'ny môtô an'ny Metropolitan Municipality ao an-drenivohitra, izay niantso azy io hoe "HomeKal".
TAFITRANO FAMPIASANA NY FAMPIASANA KOKOA
Taorian'ny fandraràna ny fanangonam-taratasy any an-drenivohitra ao anatin'ny faritry ny ady amin'ny fiparitahan'ny coronavirus, dia natomboka ny fanampiana ara-tsakafo tany amin'ireo faritra izay itoeran'ireo olona ireo miaraka amin'ny torolalan'ny filoha Yavaş.
Mustafa Koç, Lehiben'ny Departemantan'ny polisy monisipaly dia nanambara fa nanatsoaka ny otrikaretina tao amin'ny faritra izay misy ireo mpanangona taratasy, mipetraka any amin'ny faritr'i Şirindere ao amin'ny Distrikan'i Çiğdem, no nanome ireto fampahalalana manaraka ireto:
“Toerana itoeran'ireo mpanangona taratasy 600 eo ho eo. Ireo mpanangona taratasy dia samy vondrona lehibe misy risika lehibe indrindra ary manohintohina mafy ny fandefasana sy ny fiparitahan'ny otrikaretina. Noho izany antony izany dia nandrara ny fanangonana taratasy izahay. Nofaraninay ho munisipaly ny mpanangona taratasy. Namorona rafitra hametrahana ny sakafony miaraka amin'ny fianakaviany isa-maraina sy hariva isan'andro izahay. Hizara sakafo amin'ny fianakaviany izahay ho an'ny olona 5 200 izay monina any amin'ny faritra XNUMX samihafa. Manafoana ny faritra misy azy ireo izahay ary ny taratasy voaangona isan'andro. Raha ny filazan'ny mpahay siansa, dia an-taratasy ny faritra lava indrindra ao amin'ny tsimok'aretina. Mandra-pahafahantsika manana vahaolana maharitra, hanakanana ny famonoana olona isika ary hanafoana ny fihanaky ny risika. ”
Abdülkadir Aşık, izay nandray soa tamin'ny fanampiana ara-tsakafo nomanina sy nizara tao amin'ny BELPA Cuisine, dia nilaza fa: "Tsy hanangona taratasy intsony izahay noho ny virus. Fianakaviana izahay, saingy nieritreritra anay ny kaominina ka tsy namela anay noana sy mangetaheta. Misaotra betsaka ny kaominina Metropolitan aho. ”Hoy i Cheylan Avcı, mpanangom-bokatra iray hafa:“ Tsy manangona taratasy sy taratasy intsony izahay. Mitondra sakafo ho anay ny kaominina ary manondraka tsy tapaka amin'ity faritra ity ”, hoy ny fisaorana ny Kaomina Metropolitan.
Seyfettin Aslan, Lehiben'ny departemantan'ny fahasalamana dia nilaza fa nanomboka nandoto otrikaretina tany amin'ny faritra 10 izay misy biby an-dalambe izay omen'ny mpitia biby an-tsitrapo manerana ny tanàna.
MITADIAVITRA FIVORIANA 65-TAONA ARY ATOOTRA FOTOTRA AROA ANY ASKI
Ny Kaominin'i Metropolitan, izay nampiditra fepetra vaovao hanoherana ny fandrahonana ny areti-mifindra, dia hanomboka fametrahana rano ao anatin'ireo metatra misy ny mpanjifa mpivaro-taona izay feno 65 taona ka hatramin'ny talata 24 martsa.
Amin'ny maha-fanompoana azy izay azon'ny mpanjifany 65 taona sy ny zokiolona tsy afaka mivoaka amin'ny alàlan'ny fahatongavany any Başkent 153 na (0312) 616 10 00, ny ekipa ASK loading dia hanao ny fizotran-kafandrano rano ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny adiresy rano amin'ny karatra amin'ny adiresy.
ASKI, izay mampahafantatra ny mpanjifany isan'andro amin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra (sms) ary ny fampandrenesana ary miasa mandritra ny 24 ora dia nanapa-kevitra ny hanahemotra ny fomba fanakatonana ireo mpanjifan'ny trano fonenany noho ny areti-mifindra mandritra ny 2 volana. Ny talen'ny jeneralin'ny ASKİ, izay manohy manokatra rano ho an'ireo mpanjifa mpivarotra miisa 22 izay nanidy ny rano noho ny trosany tsy voaloa, dia nivadika tamin'ny rafi-panendrena ho an'ny asa eo afovoany nanomboka ny 23 martsa. mpanjifa www.aski.gov.t dia Filazana fa afaka manao fotoana fanendrena eny amin'ny ASKI ianao; hanatanteraka ny famandrihana vaovao, ny fanovana famandrihana, ny famandrihana ny fananganana sy ny famandrihana ny mpanjifa, ny fanafoanana ny famandrihana, ny fangatahana invoice, ny fanovana ny fangatahana (ny fampiharana ny tsy fahombiazana), ny fangatahana invoice ary ny fifanakalozana amin'ny Internet
MASEHIVAVY MASINA VONDRONA IZY NO AZONY INDRINDRA
Ny sampana fiarovana sy ny fanaraha-maso ny tontolo iainana sy ny ekipan'ny departemantan'ny asa fanatanjahantena an-tanàn-dehibe izay manao asa famonoana otrikaretina an-tsokosoko any amin'ireo andrim-panjakana sy fikambanana manerana ny tanàna manimba ny fiara fitateram-bahoaka isan'andro.
Raha ny ekipan'ny Departemantanam-panjakànana an-tanàn-dehibe dia manao fanadiovana miaraka amin'ireo vokatra tsy misy otrikaretina manokana indrindra eny an-dalambe sy làlana lehibe, indrindra amin'ny fanaka sy fijanonan'ny tanàna, ANKARAY, Metro ary EGO, busis ary minibus dia iharan'ny famonoana isan'andro isan'andro amin'ny torolalan'ny Filoha Yavaş.
Raha nanambara izy ireo fa afa-po amin'ny asa famonoan-disoka izay mandeha amin'ny fijanonana minibus, hoy i Fatih Özden, iray amin'ireo mpivarotra minuscule azy, dia nilaza: "Niteraka korontana lehibe ho antsika rehetra manerana an'io firenena io virus io. Ny ben'ny tanànanay Atoa Mansur Yavaş dia mahatonga ny fiara tsy voan'ny vovoka isan'andro. Maloto ny fiara misy antsika. Misaotra azy noho ny mpiasan'ny mpivarotra izahay. ”Hoy i Ender Yılmaz,“ Misaotra ny ben'ny tanàna Metropolitan Mansur Yavas izahay noho ny fomba fanavanana. Ny famonoana ny fiara eto amintsika dia vita isan'andro, "hoy izy. Murat Karakoca dia nilaza fa noho ny tolotr'asa an'ny Kaomina Metropolitan dia nitombo ny fahatokisan'ny vahoaka hoe: "Ny olontsika dia afaka mitaingina fiara mandeha soa aman-tsara. Misaotra ny munisipalintsika sy ny ben'ny tanàna Mansur Yavas izahay noho ny ezaka nataon'izy ireo. ”
Fanohizana ny fizotran-disimpia ho an'ny taksiborosy ao amin'ny faritra fitahirizana taxi-piakan'i Kızılay Güvenpark, BELPLAS A.Ş. Mpivarotra fiarakaretsaka izay misaotra ireo ekipa mpanadio naneho ny fahafaham-pony tamin'ity serivisy ity:
Dursun Göloğlu: «Amin'ny maha mpamily fiarakaretsaka anay dia tianay ny hisaorantsika ny ben'ny tanànan'i Ankara Metropolitan Mansur Yavaş. Ny fiara ataonay dia mila atsipy manohitra ny otrik'aretina isan'andro ary hamafy isan'andro. ”
Ensari Güzelyurt: “Manantena aho fa handalo ireo andro ireo. Tena faly izahay tamin'ity serivisy ity. Tianay izany ho an'ny tenanay sy ny mpanjifanay. ”
Levent Altınok: “Mba hanomezana tolotra tsara kokoa ny mponina ao Ankara dia manohana sy manohana ity fanapahan-kevitra noraisin'ny fiarahamoninay sy Ankara Metropolitan Town ity izahay. Izahay dia miezaka hanao izay fara heriny amin'ny maha-mpamily taxi anay, mba hanompoana ny mponina ao Ankara ao anaty fepetra tsaratsara kokoa. Tiako ny nisaotra ny Kaominin'i Metropolitan Ankara tamin'ny fanomezana ity tolotra ity. ”
Ny Distrikan'ny Metropolitan, izay manatanteraka ny famonoana tsy mitsaha-mitombo hatrany amin'ireo toeram-panatanjahantena mankany amin'ny tranoben'ny fikambanana tsy miankina amin'ny governemanta, tokotanim-pianarana, unit-miaramila, vondron'ny polisy, tranon'ny serivisy, hopitaly ary boulevards lehibe, dia manatanteraka asa disinfection miaraka amin'ireo fitaovana atomizer atomika ao amin'ny Altındağ Önder Saha misy sy ny faritra lemaka izay misy ny mponina Syriana.
Mitohy ny asany ny foibem-pampieran'ny MÜSİAD tsy misy fahamendrehana
Ny olana momba ny famadihana ny Masukiye ho any amin'ny tranombakoka dia mbola mitohy
Mitohy ny fanorenana fiarandalamby haingana ao Bursa
Mitohy tsy tapitra ny asa fitetezam-pirenena
Tetikasa goavam-be miisa $ X miox no mitohy
Mitohy miasa ny lalàn'ny lalamby BTK na dia ririnina aza
Mbola mitohy ny fampiasam-bola any Istanbul
Ny asfalt miasa am-pahamendrehana dia mitohy tsy tapaka
Asfalt miasa ao Kayseri
Mbola mitohy ny fanorenana Bus Terminal Altınordu tsy misy haingam-pandeha
Ahoana no fomba hitondrana ny fipoahan'ny Coronavirus?
Ny ady amin'ny fiaran-dalamby dia mitohy tsy tapaka (Photo Gallery)
Mitohy ny ady ao Bursa ao Bursa
Fanamarihana Tender: Fandrafetana ny fanaraha-maso ny sekretera crankshafts motera automatique sy…
Malalaka ny fitaterana amina mpiasa amin'ny Ivotoerana momba ny fahasalamana tsy miankina any Kocaeli!
Fiovana amin'ny YHT, faritra, Marmaray ary Başkentray fandaharana ho an'ny lamasinina sy ora